PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-07 - Livulelwe icala iGcokama ngokushaya emngcwabeni
Livulelwe icala iGcokama ngokushaya emngcwabeni
ISILOMO sikamaskandi Igcokama Elisha sivulelwe icala ngemuva kokushaya ngempama intatheli yephephandaba Ilanga izolo emngcwabeni kaMnuz Mthoko Hlalabemhlupha Xulu obengumlandeli wokuqina kamaskandi, eVuna, KwaNongoma.
UXulu udutshulwe washona emcimbini kamaskandi obuseCurries Fountain eThekwini ngeledlule. Ngokusho kwentatheli eshayiwe, uMthobisi Sithole, Igcokama belihamba noMjikijelwa no-Ali Mgube nabanye, ngesikhathi limshaya ngempama emngcwabeni.
Uthe ngesikhathi besaxoxa nalaba baculi, Igcokama linyonyobe laya ngemuva kwakhe lagadla engazelele.
“Omunye uzakwethu ebengihamba naye ucele bonke abaculi abebekhona ukuthi alumane nabo indlebe ngaphandle, saphuma sonke. Ngithe ngisaxoxa noMjikijelwa ngezwa kuqhuma ugesi wempama eqhamuka ngemuva. Ngithe ngiyaphenduka ngabanjwa abaqaphi abebekhona bathi angisuke,” kusho uSithole.
Uthe kumxakile ukushaywa kwakhe ngoba akukho gqubu alaziyo phakathi kwakhe neGcokama.
Uthe udaba lungenwe amaphoyisa amthathile aya naye esiteshini saKwaNongoma lapho evule khona icala lokushaywa.
Lithintwa Igcokama Elisha maqondana nalolu daba livumile ukuthi liyishayile intatheli. Lithe licikwa ukuthi ibhala kabi ngalo kanti futhi inezinhloso ezimbi zokudicilela phansi igama lalo. Liqhube lathi lona belize emngcwabeni, kodwa lacikeka uma selibona le ntatheli, lahluleka ukuzibamba, layishaya.
“Ube nenhlanhla ukuthola izimpama ezimbalwa, ngikhathele uyena, kufanele azi ukuthi nami ngiyinsizwa ngeke ngidlale omunye umfana. Ngehlelwa yingozi kwashona abantu, wabhala into ayithandayo. Sekushone umuntu emcimbini ngingekho, usengishadisa nalolo daba,” kusho Igcokama.
Lithe lesi sigameko sidale izindleko ngoba ngesikhathi ibaleka intatheli iphaphatheke yabhajwa ocingweni lwalo muzi obekungcwatshwa kuwona lwagqabuka, lokho okuzophoqa ukuthi lukhokhwe uyena lo mculi.